अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीको टिप्पणी : परीक्षा नै नदिई जागिर खाने ‘माननीय’ कसरी ‘उच्च नैतिकवान्’ ? | Ratopati
'सानो नेताले आउने पुस्ता होइन, आउने निर्वाचन मात्रै हेर्छन्'
personमदन ढुङ्गाना exploreकाठमाडौं access_timeभदौ २२, २०७८ chat_bubble_outline0
जनसरोकार वा संविधानसँग बाझिएका विषयमा पटक–पटक रिट बोकेर अदालत धाउने एक पात्र हुन्, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी । कुनै काम कानुनसम्मत भएन भन्ने लागेमा त्रिपाठी रिट बोकेर सर्वोच्च पुगिहाल्छन् । अधिकांश मुद्दामा उनको जित पनि भएको छ ।
पछिल्लो समय त्रिपाठीले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश र सोही अध्यादेशका आधारमा भएका सिफारिस तथा नियुक्तिको विषयलाई लिएर सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । तर, संवैधानिक इजलासबाट सुनुवाइ हुने अघिल्लो दिन नै न्यायाधीश हरि फुयाँलको एकल इजलासले संवैधानिक इजलासको सुनुवाइ नै रोक्न अन्तरिम आदेश दियो । त्यसपछि त्यससम्बन्धी सुनुवाइ नै पछाडि धकेलिएको छ ।
संवैधानिक परिषदसम्बन्धी सोही रिट, एकल इजलासको अन्तरिम आदेश र त्यसको प्रभावका सम्बन्धमा रातोपाटीले वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीसँग कुराकानी गरेको छ । प्रस्तुत छ, कुराकानीको सम्पादित अंश ः
संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश तथा त्यसका आधारमा भएका सिफारिस र नियुक्ति विरुद्धको रिट अब कहाँ पुग्यो ?
पुस २ गते नै रिट दर्ता भएको हो र लामो समयसम्म पनि त्यसको सुनुवाइ भएन । त्यसपछि बल्ल सुनुवाइको पालो आएको थियो । त्यसपछि हामीले सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशज्यू सिफारिस गर्ने समितिमा रहनुभएको र उहाँ पनि विपक्षीमा रहनुभएका कारण उक्त इजलासमा बस्न मिल्दैन भन्यौँ । लामो छलफलपछि प्रधानन्यायाधीशज्यूले सुनुवाइका लागि पेसी तोक्ने दिन र फैसला हुने दिन आफू विदामा बस्ने जानकारी गराउनुभयो । त्यही आधारमा भदौ १८ गते शुक्रबारका लागि सुनुवाइका लागि पेसी तोकिएको थियो ।
त्यो रेक्युजलको निर्णयमा न्यायिक पुनरावलोकन हुन सक्दैन । त्यो कुनै न्यायाधीशको विवेकको कुरा हो । तर, यहाँ त के भयो भने कुनै न्यायाधीशको रेक्युजलको कुरालाई पनि च्यालेञ्ज गरेर न्यायिक पुनरावलोकनको विषय बनाइयो र अन्तरिम आदेश जारी गरियो । यो संवैधानिक इजलास भनेको फाइनल कोर्ट हो, त्यसले गरेको निर्णयको पुनरावलोकन पनि हुँदैन । त्यसको निर्णय, आदेश र फैसला अन्तिम हुन्छ । त्यसकारण संवैधानिक इजलासको निर्णय वा आदेश पुनरावलोकन हुन सक्ने अवस्था नै हुँदैन । तर, भदौ १६ गते एकाएक सार्वजनिक सरोकारको विषय नै नभएको विषयमा रिट लिएर एकजना अधिवक्ता सर्वोच्च अदालत जानुभयो । सरोकार नै नभएको व्यक्तिले सर्वोच्च अदालत आफैलाई विपक्षी बनाएर लगिएको रिट हतार–हतारमा दर्ता गरियो । भोलिपल्टै पेसीमा चढाइयो र पेसी पनि स्वार्थ बाझिने न्यायाधीशको बेञ्चमा पारियो । अनि संयुक्त इजलासको निर्णय वा आदेशलाई एक न्यायाधीशको इजलासले अन्तरिम आदेश दिएर सुनुवाइ नै रोक्ने काम भयो । अहिले प्रधानन्यायाधीश नै विपक्षी रहेका संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश र सोही अध्यादेशका आधारमा भएका सिफारिस तथा नियुक्तिको सम्बन्धमा परेको रिटको सुनुवाइ रोकिएको छ ।
सर्वोच्चमा स्वार्थ समूहको नेक्सस : संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी मुद्दामा यसरी भयो जालझेल
प्रधानन्यायाधीशलाई संवैधानिक इजलासमा राख्न देउवाको ‘लबिङ’
तपाई त फेरि भ्याकेट निवेदन लिएर जानुभएको थियो नि होइन ?
हो, जब भदौ १७ गते एक न्यायाधीशको इजलासले संवैधानिक इजलासको सुनुवाइ रोक्नु भन्ने आदेश दियो, त्यसपछि म भ्याकेट निवेदन लिएर सर्वोच्च अदालत पुगेको थिएँ । तर, मेरो निवेदन दर्ता नै गरिएन । म आफैंले हालेको रिटमाथिको सुनुवाइ रोक्ने आदेश हुँदा मलाई जानकारीसम्म दिइएन । तर, त्यही विषयमा मैले भ्याकेट निवेदन दिँदा म सरोकारवाला नभएको भन्दै मेरो निवेदन अस्वीकृत गरिएको जानकारी दिइयो । मेरो निवेदन अस्वीकृत भएको जानकारी पनि मैले त भोलिपल्ट मात्रै थाहा पाएँ, त्यो पनि सञ्चारमाध्यमबाट । त्यसकारण कुनै रिट दर्ता गर्ने समयदेखि मेरो निवेदन अस्वीकृत गर्ने समयमा पनि त्यहाँ धेरै सेटिङ भएको स्पष्ट बुझिन्छ ।
संसद बहाल नरहेको अवस्थामा ४५ दिन कटेपछि त पाउने होला नि ?
त्यो कसरी पाइन्छ ? कानुनले कागजमा लेखिएको कुरा मात्रै हेर्ने होइन, त्यसको विधायिकी मनसाय पनि हेर्ने हो । संविधानको मनसाय भनेको संसद कायम रहेको अवस्थामा संसदले सुनुवाइ सुरु भएको ४५ दिनमा पनि निर्णय दिन नसकेमा स्वतः सदर हुने भन्ने हो । तर, संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर सिफारिस र त्यो सिफारिस दर्ता भएकै दिन संसद विघटन भए पनि संसदीय सुनुवाइ समिति रहने कुरै भएन । त्यसकारण संसद नै नरहेको अवस्थामा सुनुवाइ हुने कुरा नै भएन । तर, संसद नै नभएको अवस्थामा ४५ दिने व्यवस्था पनि त कायम नहोला नि ? त्यसकारण संसद पुनस्र्थापित भई संसदीय सुनुवाइ सुरु भएको मितिले ४५ दिनको गणना हुनुपर्छ ।
अर्को कुरा, संवैधानिक नियुक्ति लिनका लागि कुनै व्यक्ति उच्च चरित्रवान व्यक्ति हुनु आवश्यक छ । तर, जो व्यक्ति परीक्षा नै नदिई जागिर खान जान्छन् भने त्यस्ता व्यक्तिलाई नैतिकवान र उच्च चरित्र भएको व्यक्ति भन्न सकिँदैन । त्यसकारण यो नियुक्ति प्रथम दृष्टिमै खारेजभागी छ भन्ने हाम्रो भनाई र माग हो ।
एक न्यायाधीशको इजलासले संवैधानिक इजलासको निर्णय बदर गर्न सक्छ ?
यो न्यायिक मूल्य र मान्यताभन्दा बाहिरको कुरा हो । किनभने, यो संवैधानिक इजलास हो र प्रधानन्यायाधीशले गरेको निर्णयमाथि न्यायिक पुनरावलोकन हुन सक्ने विषय नै होइन । रिटको पनि केही सिद्धान्त हुन्छ, मूल्य र मान्यता हुन्छ । अन्तरिम आदेशका पनि केही मूल्य र मान्यताहरु छन् । अन्तरिम आदेश माग गर्नका लागि पनि निवेदकलाई अन्तरिम आदेश नहुँदा क्षति पुग्ने हुनुपर्छ, रिट दर्ता हुन पनि हकदैया पुग्नुपर्छ । तर, कुनै न्यायाधीशले आफूलाई सुनुवाइको प्रक्रियाबाट अलग राख्दैमा निवेदकको हकमा के प्रतिकूल असर पर्यो ? बरु मैले आजभन्दा ९ महिना पहिले रिट दर्ता गराएको छु र न्यायका लागि पर्खिरहेको छु ।
तर, सुनुवाइको दिन आउनुभन्दा अगाडि मलाई नसोधीकन मेरो मुद्दामा असर पर्ने गरी एउटा रिटको सुनुवाइबाट अरु रिटहरुको सुनुवाइमा प्रतिकुल असर पर्ने गरी आदेश नै जारी गर्न मिल्दैन । यो न्यायिक मूल्य र मान्यताभन्दा बाहिरको कुरा हो ।
अझै महत्वपूर्ण कुरा त के हो भने एक न्यायाधीशको इजलासले संवैधानिक इजलास वा पूर्णइजलासको सुनुवाइ रोक्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने हो । कुरो स्पष्ट छ, संविधानको अन्तिम व्याख्या सर्वोच्च अदालतले गर्छ र संविधान वा कानुनको व्याख्या सर्वोच्चभित्र पनि संवैधानिक इजलासले गर्छ । तर संवैधानिक इजलासकै सुनुवाइ रोक्ने कुरा एक न्यायाधीशको इजलासले गर्नै मिल्दैन । संवैधानिक इजलासको निर्णयमाथि पुनरावलोकन पनि हुनै सक्दैन । सर्वोच्च अदालतमाथि रिट दर्ता पनि हुँदैन र आँफैविरुद्ध अन्तरिम आदेश जारी हुन पनि सक्दैन । यो कुनै स्वच्छ सुनुवाइको मान्यताअनुरुप भएकै छैन, रिटको सिद्धान्त अन्तरगत भएकै छैन । अनि यसले न्यायको मकसद पनि पूरा गर्दैन । त्यसकारण यो अस्वीकार्य छ ।
प्रधानन्यायाधीश आफैंले इजलासमा बस्दिनँ भनेर घोषणा गर्दा पनि उनी बस्नैपर्ने दबाव वा प्रभाव कहाँबाट आयो त ?
यसमा धेरै ठूलो स्वार्थ समूहको खेल छ । प्रधानन्यायाधीशले नै हो बेञ्च तोक्ने । अनि प्रधानन्यायाधीशले कस्तो मान्छेको बेञ्च तोक्ने ? संवैधानिक इजलासको नेतृत्व गर्दा आफ्नो स्वार्थ बाझिएको भन्दै प्रधानन्यायाधीश नै पहिलो र अन्तिम सुनुवाइमा नबस्ने भनेर नैतिकता देखाइसक्नुभएको हो । जस्तो कि पहिलो संसद विघटनको सम्बन्धमा गठन भएको संवैधानिक इजलासमा केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा महान्यायधिवक्ता भएकै कारण न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की संवैधानिक इजलासमा बस्न नहुने कुरा उठ्यो । हरिकृष्ण श्रीमानले आफैं इजलासमा नबस्ने घोषणा गर्नुभयो र उच्च नैतिकता देखाउनुभयो ।
अहिलेका न्यायाधीश हरि फुयाँल पनि केपी शर्मा ओली नै प्रधानमन्त्री बन्दा महान्यायधिवक्ता रहनुभएको व्यक्ति हो । केपी शर्मा ओली (तत्कालीन प्रधानमन्त्री) नै विपक्षी रहेको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशसँग सम्बन्धित रहेको रिटमा नैतिकता देखाएर उहाँले पनि इजलासमा नबस्ने निर्णय गर्न सक्नुहुन्थ्यो । पेसी तोक्ने प्रधानन्यायाधीशज्यूलाई पनि न्यायाधीश हरि फुयाँलको स्वार्थ बाझिने कुरा थाहा नहुने भन्ने कुरा नै भएन । अझै त्यो भन्दा अगाडि नै त्यो विषय दर्ता हुन सक्थ्यो कि सक्थेन त्यो नै प्रश्न छ नि ।
सुनुवाइ रोक्ने अन्तरिम आदेशलाई तपाईं कसरी हेर्नुहुन्छ ?
यो न्यायिक विचलन नै हो । यो न्यायिक मूल्य र मान्यताभन्दा बाहिर छ । यो आम चासोको विषय अर्थात् पीआइएलको दुरुपयोग हो किनभने पीआइलएको प्रयोग जनचासोको मर्मभन्दा बाहिर जानेगरी वा यसको मर्मलाई मार्ने गरी आउँदैन । विधिको शासनलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि त्यसको प्रयोग गरिँदैन । र, बेञ्चले न्यायिक मनको प्रयोग गर्नुपर्छ । तर, यो आदेशको असर त यति नकारात्मक पर्छ कि यस्तोखालको आदेशले बढावा पाइरहने हो भने त भोलि सर्वोच्च अदालत नै ड्यामेज हुन्छ ।
तपाईले भनेजस्तै सर्वोच्च अदालतलाई नै ड्यामेज गर्न राजनीतिक दलको भूमिकाचाहिँ छ कि छैन ?
नेपालका राजनीतिक दलहरु सुविधाको व्यापार गर्छन् । उनीहरुसँग दीर्घकालीन सोच र योजना हुँदैन । उनीहरुको कमिटमेन्ट विधिको शासन होइन । राजनीतिक दलहरुले तात्कालिक फाइदा हेर्छन्, यदि उनीहरुलाई तत्काल फाइदा हुने छैन भने उनीहरुले संविधान हेर्दैनन् । उनीहरुको ध्यान भनेको तात्कालिक फाइदामै रहेको हुन्छ । त्यसकारण राजनीतिक दलहरुले संविधानलाई अवसरवादी ढङ्गले प्रयोग गर्ने गरेका छन् । संवैधानिक वा कानुनी दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने राजनीतिक दलहरु समस्याको समाधानका लागि नभएर समस्याकै लागि मात्रै हुन् । राजनीतिक नेतामा दीर्घकालीन चेतना, योजना र विचार चाहिन्छ । तर, हामीकहाँ त्यस्ता प्रकृतिका नेता नै छैनन् । सामान्य प्रकृतिका नेताले आउने पुस्ता होइन, आउने निर्वाचन हेर्छन् । तर हामीकहाँ त आउने निर्वाचनसम्म हेर्ने नेता पनि छैनन् । तत्कालका लागि के गर्दा फाइदा हुन्छ, त्यही हेर्ने नेता छन् ।
अब सुनुवाइको सुरुवात कसरी हुनसक्छ ? गतिरोध कसरी रोकिन सक्छ ?
अबको बाटो भनेको कुनै पनि हालतमा संवैधानिक इजलासको सुरुवात नै गर्ने हो । संवैधानिक इजलास आफैले निर्णय गरेर पनि सुनुवाइको सुरुवात गर्न सक्छ । यसबाट न्यायपालिकाको गरिमा जोगाइराख्न सकिन्छ । यसका लागि प्रधानन्यायाधीश मुख्य जिम्मेवार व्यक्ति हुन् भने अन्य न्यायाधीशको भूमिका पनि उत्तिकै हुन्छ । अदालतको मर्यादालाई आँच आउन दिनुहुँदैन । त्यसकारण मर्यादाको रक्षाका लागि हामी व्यक्तिगत रुपमै पनि जानुपर्ने हुनसक्छ ।
यदि प्रधानन्यायाधीश पनि यसको विरुद्धमा जानुभयो भने हामी जन संवाद गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ । जनस्तरबाट आवाज उठाउँदै प्रश्न गर्नैपर्छ । किनभने, अदालत स्थायी हो र प्रधानन्यायाधीश अस्थायी हो । जनविश्वास नै न्यायपालिकाको सबैभन्दा ठूलो पुँजी भएको कारण त्यो पुँजीलाई बचाइराख्नुपर्छ, क्षयीकरण हुन दिनु हुँदैन ।
कर्णालीमा काँग्रेसलाई माओवादीको जवाफ– यही तरिकाले मुख्यमन्त्री बन्ने भए बनेर देखाउनुस्
‘मनसुनपछि पनि यस्तो बाढी आउला भन्ने परिकल्पना नै गरेका थिएनौँ’
आफ्नै जन्मदिनमा यी अभिनेताले गुमाएका थिए पूरा परिवार, बुवाले नै हानेका थिए सबैलाई गोली
बागमती प्रदेशकी मुख्यमन्त्री शाक्यद्वारा राजीनामा घोषणा
आयुषा बनिन् मिस टुरिजम नेपाल
पूर्वन्यायाधीश पण्डितको निधनमा शोक प्रस्ताव पारित गर्न ‘फुल कोर्ट’को बैठक